Kwenziwe ngentando imisila yenkomo Factory - China ngokwezifiso umsila wenkomo Abakhiqizi futhi abahlinzeki
Ngokuhlukile kunemisila yenkomo yendabuko, imisila yenkomo eyenziwe ngezifiso iheha iso. Imisila yenkomo ingakhiqizwa ngomphumela okhanyayo, engeza amatshe ayizinsimbi, noma engeza izinhlamvu ezigcwala. Le misila yenkomo ingasetshenziswa ngezikhathi ezikhethekile. Isibonelo, umphumela okhanyayo wenza imisila yenkomo ibonakale ebumnyameni, esetshenziswa kakhulu ebusuku, iklabhu yasebusuku nokunye. Awukhathazeki ngokuthi ilogo ibingabonwa ngaphansi kobusuku. I-logo izoba umxhwele ngokwengeziwe eboniswe ebumnyameni. Ukwengeza ama-rhinestones noma izinhlamvu ezigelezayo kwenza i-lanyard ibe yimfashini ethe xaxa. Ama-rhinestones acwebezela ngaphansi kwelanga, amantombazane ancamela le misila yenkomo. Imisila yenkomo iyathengiswa ngokushisayo ngaphansi kwalezi zinto zemfashini. Izinsizwa zikhetha lezi zintambo futhi zibe uphawu lwemfashini. Ilogo ingafakwa ezinkambisweni eziningi njengokuphrinta kwe-silkscreen, ukudlulisa ukushisa, ukwelukwa nokunye. Ungahle udideke ukuthi iyiphi inqubo esetshenziswayo ngokwemisila yenkomo yakho eyenziwe ngezifiso. Shiya le mibuzo kithi, iqembu lethu lokuthengisa elizohlinzeka ngeziphakamiso ezifanele, aligcini nje ngokwenza i-logo ivelele, kepha futhi nokuncintisana ngamanani. Misa ukungabaza futhi uxhumane nathi ngasikhathi sinye. UJian uzoba umphakeli wakho wesikhathi eside futhi onokwethenjelwa.
Silkscreen Ephrintiwe Polyester imisila yenkomo
Imisila yenkomo ye-CMYK Offset Printing
Inayiloni Imisila yenkomo
Mbumbulu Inayiloni Imisila yenkomo
Ephrintiwe Satin Imisila yenkomo
Intambo imisila yenkomo
Nokwelukiweyo Imisila yenkomo / Nokwelukiweyo Imisila yenkomo
Imisila yenkomo ye-satin ephothiwe
Imisila yenkomo eboshelwa kalula e-Eco-Friendly
Imisila yenkomo yokudlulisa ukushisa
Imisila yenkomo ebonakalisayo